एमालेको सरकारलाई प्रश्न : संसद् बैठक ४ असोजमा किन सारेकाे ? « Kathmandu Pati
एमालेको सरकारलाई प्रश्न : संसद् बैठक ४ असोजमा किन सारेकाे ?
काठमाण्डु – नेकपा एमालेले सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकले पहिले ल्याएको बजेटमा केही योजना कटौती गरेकोमा आपत्ति जनाएको छ । पार्टीका महासचिव ईश्वर पोखरेलले एक विज्ञप्ति जारी गर्दैै आफ्नो सरकारको पालामा ल्याइएका एक हजार ४०० भन्दा बढी विकास आयोजना कटौती गरेकामा आपत्ति जनाएका हुन् ।
एमालेले बजेट जस्तो संवेदनशील विषयमा सरकारको उदासीनता र गैरजिम्मेवार रवैया देखिएको भन्दै त्यसप्रति खेद व्यक्त समेत गरेको छ । ‘सन्तुलित विकासको अवधारणाअनुरूप प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूको आग्रहमा अघि बढाएको निर्वाचन क्षेत्रस्तरीय रणनीतिक सडक र पालिका जोड्ने पहुँच मार्गलगायतका एक हजार ४०० भन्दा बढी विकास आयोजना कटौती गर्न पुगेको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरकारले अनिवार्य दायित्वभित्र पर्ने वित्त व्यवस्थापनको बजेट कटौती गर्ने गैरजिम्मेवापूर्ण काम गरेको छ ।’
लामो तयारीपछि ल्याइएको प्रतिस्थापन विधेयकले बजेटरी सिद्धान्त र वित्तीय अनुशासनलाई समेत उल्लंघन गरेको भन्दै विज्ञप्तिमा त्यसले विकास बजेटमा कटौती गर्ने र अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च वृद्धि गर्ने गलत बाटो अवलम्बन गरेको उल्लेख गरिएको छ ।
एमालेले प्रतिपक्षको सहमतिबिना नै संसदको काम कारवाही बढाउएको प्रति पनि आपत्ति जनाएको छ । महासचिव पोखरेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा समाभुख अग्निप्रसाद सापकोटा र सरकारले प्रतिपक्षको सहमतिबिना नै संसद्को काम कारवाही अघि बढाउने काम भइरहेको प्रति पनि आपत्ति जनाइएको छ ।
सरकार र सभामुख सापकोटाका तर्फबाट भएका अनुचित र गैरकानुनी कार्यका कारणले नै प्रतिनिधिसभामा असहज स्थिति सिर्जना भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । एमालेले सभामुखबाट भएको पदीय मर्यादाविपरीतको अनुचित कार्यका विरुद्धमा आफ्नो असहमति र विरोध प्रकट गर्दै आइरहेको छ ।